Dhaqaalaha ku Baxa Doorashooyinka Somaliland – Somaliland Elections
Xogta aan raadinaynay waxaa gacanta ku hayey dad kooban, sidaas awgeed waxaan bartilmaameedsanay hoggaanka sare ee Xisbiyada, masuuliyiinta laamaha maaliyadda Xisbiyada ama shakhsiyaad xogogaal u ahaa lacagaha doorashada ku baxay (Snowball Sample). Muddo afar bilood ah oo aan xog ururinta wadnay waxaan waraysannay illaa 21 qof oo ay ku jiraan masuuliyiinta sarsare ee Xisbiyada sida qaar ka mida musharaxiinta ka qayb-galay doorashadii madaxtinimada, taas oo aanu xisbi walba ka waraysanay 7 xubnood.
Sidoo kale waxaan waraysanay 9 xubnood oo kale oo ka mida ururada bulshada rayidka ah, xubno ka shaqaynayey doorashada ama dad kale oo aqoon u lahaa doorashadii madaxtinimada (2017) ee Somaliland sida ay u dhacaysay. Ujeedada aan u xulanay masuuliyiinta aan waraysannay ayaa ahaa, maadaama ay yihiin dadka hayey xogta aan raadinaynay.
Ka sokow dadka aan tooska u waraysanay, waxaan kale oo siyaabo kala duwan, xog uga helnay Hay’adaha ka shaqeeya hawlaha doorashada, dad u shaqeeya hay’adaha caalamiga ah, iyo xubno kale oo muhiim u ahaa inaan la kulano.
Dadka aan waraysanay, maanaan isticmaalin magacyadooda, sababo la xidhiidha nooca xogta aan raadinaynay oo ahayd mid xasaasi ah, isla markaana ay codsadeen qaar ka mida masuuliyiinta ka qayb qaadanayey xor-ururintani inaan la shaacin.
Waxaa xusid mudan, in xog ururintani ay tahay oo keliya, natiijada ka soo baxday waraysiyada aan la yeelanay 30-ka xubnood ee aan waraysanay, hase ahaatee ay iftiiminayso in loo baahan yahay in cilmi-baadhis intan ka badan la sameeyo si loo helo xog intan ka faahfaahsan.
Xarunta CPA waxay si ka madax-banaan – dadka ay daraasaddan ku waraysatay ay – ku ogaatay inay jiraan lacago intan ka badan oo loo isticmaalay ololaha doorashada hase ahaatee saddex sababood MIDKOOD aanay noola wadaagin masuuliyiinta Xisbiyada ee aan waraysanay:
a) Xisbiyada oo aan rabin in la ogaado lacagaha kaga baxay doorashada, taas oo masuuliyiinta qaarkood ay nala wadaageen xog ka yar [sida ay ilo madaxbanaan noo sheegeen] inta Xisbigaasi u isticmaalay ololihii doorashada. b) Xisbiga oo aan doonayn in la ogaado lacagaha uu ka helay ganacsatada taageerada u fidisay, ama lacago ka soo galay dadka Xisbiga Guushiisa ka shaqaynayey. c) Xisbiga oo ay marar badan dhici karto inaanu xog badan ka haynin lacagaha ay isticmaalayaan ganacsatada iyo dadka kale ee guushiisa ka shaqaynaya.
Haddaba, Xarunta CPA waxay warbixintan ku soo bandhigaysaa, natiijada uga soo baxday xog ururinta ay samaysay, oo keliya.
1.1 LACAGAHA KU BAXAY DOORASHADII MADAXTINIMADA EE SOMALILAND:
Lacagaha ku baxa doorashooyinka Somaliland waxay u kala baxaan, kuwo si toosa ugu baxa hannaanka doorashada, sida qalabka doorashada, amniga, shaqaalaha ka shaqaynaya goobta doorashada iwm. Lacagtaasi waxaa kala bixiya xukuumadda Somaliland iyo Qaadhaanbixiyayaasha taageerada u fidiya doorashooyinka Somaliland.
Lacagtaas waa mid si guud loo heli karo, hase ahaatee waxaa jira lacago kale oo tiro badan oo ku baxa doorashada Somaliland kuwaas oo aan xog badan laga hayn inta ay le’eg yihiin, lacagahaas waxaa ka mida, lacagaha ay xisbiyadu u isticmaalaan ololaha doorashada, lacagaha ay reeruhu xisbiyada ku taageeraan, lacagaha ganacsatadu xisbiyada ku taageeraan iwm. Haddaba xarunta CPA waxay isku dayday inay soo bandhigto oo keliya qaybta la ogyahay, gaar ahaan xogta ay nala wadaageen oo keliya dadka aan waraysanay, waxaase jiraya qaybo badan oo aan illaa haatan la ogayn inta ay le’eg yihiin.
Si guud lacagaha ku baxa doorashooyinka Somaliland waxay u qaybsamaan afar qaybood oo waaweyn kuwaas oo kala ah:
a) KHARASH SI TOOSA UGU BAXA DOORASHADA, taas oo gasha hawlaha farsamo, waxaana inta badan kharashkaas uu ka yimaadda Xukuumadda Somaliland iyo Qaadhaan bixiyayaasha. Sida uu sheegay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay labada gole baarlamaan ee Somaliland, ayaa sheegay in lacagta ku baxday doorashadii Somaliland ee qabsoontay November 13, 2017 inay ahayd $24 Milyan, taas oo 54% ay ka timi Xukuumadda Somaliland oo dhigmaysa $13 Million halka 46% ay ka timi beesha Caalamka oo u dhigmaysa $11 Million.
b) LACAGAHA SOO GALA XISBIYADA QARANKA EE AY U ISTICMAALAAN HAWLAHA DOORASHADA. Xog sugan lagama hayo inta ay le’eg tahay lacagtaasi, sidoo kale ma jirto xisaab-celin furan oo ay Xarunta CPA aragtay ama ogaatay oo la xidhiidha xisaab celinta maaliyadda Xisbiyada ee ku aaddan kharashaadka ay ku isticmaalaan hawlaha doorashada. Masuuliyiinta aan waraysanayna, nooma suuro gelin inaan ka helno cadad sugan oo la xidhiidha lacagaha ay ku isticmaaleen hawlaha doorashada, hase ahaatee masuul waliba wuxuu nala wadaagay qiyaasta ugu macquulsan ee uu u malaynayo inay Xisbigiisa kaga baxday doorashada. Lacag ka badan $20 Milyan oo dollar ayaa celcelis ahaan ay masuuliyiintaasi sheegeen inay saddexda Xisbi ku isticmaaleen doorashadii madaxtinimada ee ugu dambaysay. Lacagtaas 96% waxaa isticmaalay laba xisbi oo keliya. Inkasta oo ilo ka madax-banaan Xisbiyadu ay sheegayaan in lacagtu intaas ka badan karto.
c) LACAGAHA KA YIMAADDA AMA AY ISTICMAALAAN REERAHA XISBIGA TAAGEERA: Waxaa jira Guddiyo Qaran oo reeraha ah, kuwaas oo ka hareer dhisan Xisbiga, waxaana guddiyadaasi ay ururiyaan dhaqaale aad u badan, oo ay ku bixiyaan hawlaha guusha u keenaya Xisbiga. Xog sugan lagama hayo Xaddiga lacageed ee Guddiyada reeruhu u isticmaaleen Hawlihii Doorashada. Waxaase Xarunta CPA ay ilo kala duwani u xaqiijiyeen in hawlihii kaadh-qaybinta ay Xisbiyada iyo Guddiyada reeruhu u isticmaaleen $8 illaa $10 Milyan oo dollar.
d) TAAGEERAYAASHA XISBIGA IYO QURBE-JOOGTA: Waxaa jira Guddiyo heerkoodu hooseeyo oo ka dhisan degmooyinka, oo dhaqaale ka hela qurbe-joog kuwaas oo iyana hela lacago kala duwan, isla markaana kharash badan bixiya iyaga oo taageeraya Xisbi ay isku hayb yihiin. Guddiyadaas laftooda xog badan lagama hayo lacagaha ay isticmaaleen.
Xog-ururinta ay samaysay xarunta CPA waxaa uga soo baxday in lacag ka badan $54 Milyan oo dollar inay ku baxday doorashadii madaxtinimada ee qabsoontay bishii November 2017. Qiyaastaas oo aan ka samaynay, xogaha aan ka helnay dadka aan sida tooska ah u waraysay, oo isugu jirta
 Qiyaas laga bixiyey lacagaha ku baxay gaadiidka lagu raray taageerayaasha, ama lacago ay taageerayaasha xisbiyada ku bixiyeen guddiyada reeruhu,
 Lacagaha sida tooska ah ugu baxay hannaanka doorashada oo ay bixiyeen Xukuumadda Somaliland iyo Qaadhaan-bixiyayaashu.
 Qiyaasta lacagaha ay Xisbiyadu u isticmaaleen hawlaha doorashadii madaxtinimada iyo ololihii doorashada ee ay galeen.
Hase ahaatee xogo ka madax-banaan dadka aan waraysanay ayaa CPA u sheegay in lacag intaas ka badani inay ku baxday Diiwangelintii codbixiyayaasha iyo Doorashadii ka dambaysay, waxaase adag in la helo hab sugan oo lagu mala’awaali karo tirada rasmiga ah ee lacagta ku baxday doorashada madaxtinimada ee Somaliland, waana mid u furan cid kasta oo doonaysa inay halkaas ka sii amba-qaaddo xog ururintan, si loo ogaado tirada rasmiga ah.
Warbixinta oo Dhamaystiran halkan ka akhriso: Warbixin Dhaqaalaha Doorashooyinka